Global Voices teny Malagasy » Seraserao ny zonao! Zon’olombelona ny zo an-tserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Marsa 2019 3:59 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Mediam-bahoaka, Fitantanana-aterineto, GV Mpisolovava
Avy amin'i Joy Liddicoat , Mpandrindra ny tetikasa, Zon'olombelona ny zo aterineto , Fikambanana ho an'ny fifandraisana liampandrosoana – Association For Progressive Communications (APC). 
(Fanamarihan'ny mpanoratra: Ity no voalohany amin'ireo fandraisana anjara maromaro tato amin'ny GVA nataon'ireo mpandray anjara avy amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ity herinandron'ny Forum ho an'ny Fitantanana ny Aterineto ( Internet Governance Forum -IGF) ao Nairobi, Kenya ity. Raha mila fanazavana bebe kokoa amin'ny fomba hanarahana sy handraisana anjara an-davitra ao amin'ny IGF dia tsindrio ato .)
Ny alina alohan'ny Internet Governance Forum, dia efa ho olona zato no nivory  mba hifantoka momba ny fidirana, ny zo, ny fampandrosoana ary ny fankaherezana amin'ny aterineto. Na dia teo aza ny fimaroan'ny feo avy any atsimo manontolo, dia nahagaga ny fitovian'ny olana.
Eva Kaloki avy ao amin'ny Kenyan Human Rights Commission  [Vaomieran'ny Zon'olombelona Kenyana] nanipika momba ny fiseraserana ara-drariny ho an'ireo mponina any amin'ny faritra ambanivohitra. Nanantitrantitra ny herin'ny teknôlôjia eo am-pelatanan'ny olona ihany koa izy, ​​araka ny asehon'ny fahaterahan'ny Ushahidi , sehatra loharanom-baovao malalaka ho ifarimbonana hanangonam-baovao momba ny herisetra taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 2007 tany Kenya.
Bidi Bala avy ao amin'ny Fantsuam  ao Nizeria nanasongadina fa raha mbola mitoetra ny olana momba ny fidirana antserasera, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra, dia manome fahafaha-miserasera kokoa noho ny telecentres  ny finday GSM . Amin'ny fahazoana miditra, dia misy ny fangatahana fandraisana anjara ara-politika ary miseho ny famantarana fampiasana ny teknojiam-baovao TIC  handraketana ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​izay mitarika amin'ny fisamborana ireo nanitsakitsaka amin'ny tranga sasany .
Any Pakistana, Shahzad Ahmad avy ao amin'ny Bytes for All  niresaka momba ny fanakatonana ny FaceBook, YouTube ary tranonkala fiarahamonim-pirenena nandritra ny adiny telo tamin'ny herinandro lasa. Nanjary niha-nitombo ny fanakatonana tranonkala ataon'ny governemanta.
Avy any India, nitatitra i Anja Kovacs  fa mampiasa cybercafe ny ankamaroan'ny olona (indrindra fa ny mahantra), saingy rahonan'ny lalàna vaovao ny fidirana an-tserasera amin'ny alalan'ny fangatahana ny fihazonana ny mombamomba ireo mpiserasera nandritra ny 12 volana, ny kara-panondro, ny sary tamin'ny nidirana hiserasera ary ny fandràrana ireo zaza tsy ampy taona amin'ny fampiasana aterineto tsy misy fanaraha-maso.
Graciela Selaimen avy ao amin'ny Instituto NUPEF  any Brezila nanamarika fa mandoa vola avo dimy heny noho ireo mpiserasera ao Paris ny mpisera aterineto Breziliana ao Amazonia rehefa miserasera aterineto.
Steve Song avy ao amin'ny Village Telco  namintina ireo olana momba ny fidirana, ny fampandrosoana ary ny zo ao anatin'ny sokajy roa lehibe: ny fahazoana miditra sy ny fanohizana izany. Nitaky fomba fitantanana aterineto mifototra amin'ny zo ireo mpandray anjara avy amin'ny sehatra tsy miankina, ny governemanta ary ny fiarahamonim-pirenena.
Eto amin'ity sehatra ity, mazava ho azy fa mitodika amin'ny lohahevitra momba ny fitantanana ny aterineto sy ny anjara andraikiny amin'ny dingana andraisan'ny maro anjara ny governemanta (araka ny hita tamin'ny fanambarana vao haingana nataon'i India, Brezila ary Afrika Atsimo ). Saingy tsy tokony ho esorina amin'ireo olana atrehin'ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana ny politika mifandraika amin'izany, na koa takonana ahafahan'ny governemanta sy ny hafa manafina ny fitsabahan'izy ireo tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona sy ny aterineto.
Araho ao amin'ny @internetrights  ny siokan'i Joy avy amin'ny IGF mandritra ny herinandro. Ho an”ireo sioka avy amin'ny mpandray anjara rehetra, dia araho ny tenirohy #IGF11 ao amin'ny Twitter.
(Sary avy amin'ny APC.org )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/19/136077/
 Zon'olombelona ny zo aterineto: http://www.apc.org/en/projects/internet-rights-are-human-rights
 Fikambanana ho an'ny fifandraisana liampandrosoana – Association For Progressive Communications (APC).: http://www.apc.org/
 Forum ho an'ny Fitantanana ny Aterineto (: http://www.intgovforum.org
 tsindrio ato: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/09/26/igf11guide/
 fanakatonana : http://www.dawn.com/2011/09/20/court-orders-curb-on-sites-spreading-hatred.html
 fanambarana vao haingana nataon'i India, Brezila ary Afrika Atsimo: http://blog.internetgovernance.org/blog/_archives/2011/9/17/4901669.html